I-KDE: wamukelekile kudeskithophu ye-semantic (ingxenye 2) | Kusuka kuLinux
I-KDE: wamukelekile kudeskithophu ye-semantic (ingxenye 2)
Ukuhlonipha ukwamukelwa ngomlilo eyayinakho i-athikili edlule, kubalulekile ukuthi sikhombise, kumakholamu alandelanayo, a) kungani KDE akusekho i- isilo izinhlelo ezazikhubazekile, futhi b) kakhulu kangakanani ideskithophu ye-semantic maqondana nezinhlelo ezinomkhawulo, nokusetshenziswa okuncane kwemithombo. Ngizoqala ekugcineni, ngohambo lokuzijabulisa olwedlule.
Ezinsukwini ze-KDE 3, isici esisetshenzisiwe futhi esinamandla kakhulu se-KDE sasisebenzisa ama-KIOslaves. I-audiocd: // KIOslave, isibonelo, kwakuyindlela esheshayo yokuguqula i-CD yomsindo ibe yinoma yini, kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza olutholakalayo. Omakadebona be-KDE babezishaya isifuba ngokuthi bekuphakeme kanjani ukuxhuma ku-FTP kusuka ku-Konqueror, bese ufaka amakheli ohlelo lwe-Windows nge-smb: //, ssh logins with fish: //, kanye nemenyu enezinhlelo: //.
Ideskithophu ye-semantic ye-KDE 4.10 iyanda kulo mqondo, futhi isinike ama-KIOslaves ama-4 esingawasebenzisa, aphelelwe yisikhathi, futhi ngokushesha.
- Imibhalo yakamuva: // Yinqolobane esezingeni eliphakathi nendawo yemibhalo yakamuva. UNEPOMUK ubala ukuthi wagcina nini a
file, futhi izogcina izinqamuleli zamafayela wokugcina asetshenzisiwe. Lokhu
ayifani nje kuphela neZeitgeist, kepha uma umsebenzisi esebenzisa iZeitgeist nge
I-GNOME, i-NEPOMUK izosebenzisa iZeitgeist uqobo ukuqoqa lolu lwazi. Ngakho-ke, imibhalo yakamuva: // ayizukuqukatha kuphela imininingwane evela kumaseshini we-KDE, kepha futhi nezikhathi ze-GNOME, inqobo nje uma zisebenzisa iZeitgeist.
- imisebenzi: // Le KIOslave enhle, eyethulwe nge-KDE 4.10, ivumela umsebenzisi we-KDE ukuthi avule amafayela ahlobene nemisebenzi ethile kwideskithophu ye-KDE, futhi mhlawumbe, kwabaningi, izaba ezingekho zokuqala ukusebenzisa Imisebenzi nokuyeka ukukholelwa ukuthi ama-desktops akhazimulisiwe akhazinyulisiwe. Lokhu kuyathakazelisa.
Ngokuzenzakalelayo, ideskithophu ye-KDE inomsebenzi, lapho ungaqala khona ama-desktops amaningi njengoba ufuna. Kodwa-ke, uma sifuna ukuhlukanisa esikwenzayo emsebenzini nalokho esikwenzayo ukuzijabulisa, imisebenzi emibili ingalungiswa, kusetshenziswa isithonjana samachashazi ama-KDE 3. Sizothola inkhulumomphendvulwano enjengale.
Ngemuva kokusebenzisa imisebenzi, singaqalisa iDolphin, chofoza kubha yokuhlela, susa yonke indlela ephumayo bese ubhala imisebenzi: // ngendlela endala. Ngakho-ke sizoba nale ngcezu enhle ye-déjà vu.
- umugqa wesikhathi: // Umugqa wesikhathi wemibhalo evuliwe. Kuyafana futhi nokwenziwa yiZeitgeist, futhi kuzosebenza futhi nolwazi oluqoqwa yiZeitgeist. Iphelele lapho ufuna ukubuyela kumafayela owavule ngoMsombuluko odlule.
Uma ungafuni ukubhala, futhi uma ubheka ngokucophelela kubha eseceleni yeDolphin evela ezithombeni zami, uzobona isigaba esithi “Okusanda kufinyelelwa”. Lokho akuyona enye into futhi akukho ngaphansi komzamo wokuletha umugqa wesikhathi: // izici eziseduze nomphakathi, into ebidingeka njalo uma kukhulunywa ngamaKIOslaves.
- amathegi: // I-KIOslave yakamuva nayo entsha ku-KDE 4.10. Uhlelo lwe-NEPOMUK lukuvumela ukuthi unikeze amathegi kumafayela, namathegi: // akhombisa amathegi, namafayela ahlobene nawo. Hhayi lokho kuphela; amalebula angasuswa lapha.
Lokhu kufanele uma sinamaphrojekthi. Amalebula angasetshenziswa esikhundleni samafolda ukuhlela amafayela, futhi ideskithophu ye-semantic izogcina umkhondo wamaphrojekthi, izolandela amafayela noma ngabe ahamba kuyo yonke ifolda yasekhaya, futhi azosivumela ukufinyelela ngokushesha lawo mafayela.
Manje, uyazibona lezo zimpawu kubha yami engezansi? Izithonjana zokwabelana, ukukhetha nokuxhuma? Isitolimende esilandelayo ngizokhuluma ngalokho nokuningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-KDE: wamukelekile kudeskithophu ye-semantic (ingxenye 2)
UJavier Garcia kusho
Ngiyabonga ngemininingwane engiqale ngayo ukusebenzisa i-linux ngenkathi i-kde yayingu-4.6.5 futhi noma ngizama ukusebenzisa imisebenzi, angiyiqondi. Kepha ngalokhu okufakiwe ngiyaqiniseka ukuthi ngizothola okuningi ku-KDE.
Phendula uJavier García
UMatias Miguez kusho
Imininingwane emihle kakhulu! Kuyathakazelisa kakhulu ikakhulukazi kumuntu ongakaze azi ukuthi le "desktop semantic" imayelana nani.
Phendula uMatias Miguez
Yabelana, Khetha futhi Xhuma? kuzwakala kuthakazelisa…
Ngingabeka kanjani ibha ohlangothini lwesobunxele? openSuSE Futhi kde 4.10 uma ungakwazi ukuxazulula ukungabaza ngokushesha okukhulu ngingakuthokozela 🙂
Lapho izakhi zemifanekiso zivuliwe, ibha ngayinye inesibambo esifana nokhefana. Chofoza kuso futhi uzobona inkinobho ethi "Screen Edge." Cindezela bese ubamba inkinobho yegundane langakwesokunxele kule nkinobho ngenkathi uhudula iphaneli yakho. Ungayishiya onqenqemeni lwesikrini osifunayo.
Uma wazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani, ideskithophu ye-semantic iyamangalisa.
Imikhombandlela emihle kakhulu.
Ngokungafani! Ngiyabonga ngokusinda kwakho ushiye ukuphawula kwakho.
Nokho, yeka injabulo!
Landa i-Line Card.
I-ElementalOSX_Chrome: Itimu ye-Chromium